စိတ်ကြိုက်ဆောင့်စမ်းပါ – မြန်မာသတင်းစုံ
တိုလျှင်တုတ် သေးလျှင်ရှည်ပါစေဟု မိန်းမတို့ဆုတောင်းပြည့် လီးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါ၏။ ‘‘ လာတော့လဲ ဘဘကြီးဟာကကြီးသားနော် ’’ ခင်သက်ထားကပေါင်နှစ်လုံးကိုကားပေးလိုက်ပြီးလျှင် ဆောက်ရည်ကြည်များရွမှ်းနေသည့် ဆောက်ပတ်ထဲလီးမြုပ်အောင်ဆွဲထည့်ပေးလိုက်သည်။ ‘‘ မကြီးပါဘူးကွဲ့ ခံကြည့်တော့သိမှာပေါ့ ’’ ဦးဘကြည်သည် အသင့်ထည့်ပေးထားသော သူ၏လီးကြီးကို တဝက်မျှဝင်အောင်ထိုးသွင်းလိုက်ပြီးလျှင် နို့နှစ်လုံးကိုဆွဲ၍ တချက်ချင်းမျှင်းဆောင့်၏။ ခင်သက်ထားမှာထိုထက်ကြီး၍ရှည်သောလီးများကိုခံဖူးသဖြင့် ကျင့်သားရနေသော်လည်း ရုတ်တရက်ဝင်သွားသောအခါ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့သွားလေသည်။ ‘‘ နာလို့လား ထား ’’ ‘‘ မေးမှမေးရက်ပလေ ဘဘကြီးရယ် . . . ထားကအပျို၊ ဘဘကြီးကလူအိုလဲဖြစ်ပြန် လီးကလဲကြီးပြန်ဆိုတော့နာတာပေါ့ . . .။
ထားဒီလိုယောက်ျားနဲ့ တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ဘဘကြီးကိုချစ်လွန်းလို့ အခုလိုကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီးခံပေးတာသိလား၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင် ကိုယ့်ထက်လဲအသက်အရွယ်ကြီးတော့ ထားအနေနဲ့ မရှက်နိုင်ဘဲ ဘဘကြီးလီးကိုဆွပေးတယ်မဟုတ်လား ’’ ‘‘ သိပါတယ်ကွယ် . . . ဘဘကြီးကဒါကြောင့်ချစ်တာ ’’ ဦးဘသည် ခင်သက်ထား၏ ဗိုက်ပေါ် သို့တသားထဲကျအောင်ဖိချလိုက်ပြီးလျှင် ချိုင်းအောက်မှလက်လျှို၍ သိုင်းဖက်ခါဆယ်ချက်ခန့်ဆက်ဆောင့်ပေးနေ၏။ သူ့ဗိုက်ခေါက်သားကြီးကခံနေသဖြင့် လီးမှာခင်သက်ထားဆောက်ခေါင်းတွင်းသို့မဝင်ဘဲ သုံးပုံနှစ်ပုံမျှသာဝင်ထွက်နေသည့်အတွက် ခင်သက်ထားအဖို့အားမလိုအားမရဖြစ်နေ၏။ အောက်မှပင့်လျှက် စကောဝိုင်းသလိုဝိုင်း၍ ခါးလေးကိုကော့ကော့ထိုးလိုက်ရာ ဦးဘသည်အထူးဇိမ်တွေ့နေ၏။
အပေါ်မှသုံးလေးချက်ညှောင့်လိုက် နားနေလိုက်နှင့် ခင်သက်ထား၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို တပြွတ်ပြွတ်စုတ်နေလေ၏။ ခင်သက်ထားကလည်း ဦးဘ၏ကျောပြင်ကြီးကို သိုင်းဖက်ခါမျက်လုံးအစုံဝင်းနေ၏။ ဦးဘ၏ကိုယ်လုံးမှာ ဝလွန်းသဖြင့် ကျော်မိုး၊ ဟာမက်၊ လီလျောင်တန်တို့၏ သုံးကိုယ်စာလောက်လေးသော်လည်း ခင်သက်ထားသည် ကာမစိတ်ကြောင့် မမှုပေ။ အောက်မှနေ၍တအင်းအင်း တအဲအဲညဉ်းညူရင်း ဦးဘ၏နှုတ်ခမ်းကိုပင် အတင်းလိုက်စုတ်နေ၏။ ‘‘ ဆောင့်လေဘဘကြီးရဲ့ အပေါ်ကဖိထားရုံနဲ့ပြီးမှာလား ’’ ခင်သက်ထားကအားမလိုအားမရ ပြောဆိုရင်း သူ၏ပေါင်နှစ်လုံးကို အစွမ်းကုန်ကားပေးလျှက် သုံးလေးချက်ကော့ထိုးပေးလိုက်သည်။ ဦးဘမှာမောနေ၏။ စိတ်ရှိတိုင်းလဲထင်းတိုင်းမဆောင့်နိုင်ပေ။
ဆောင့်နေတာပဲထားရဲ့ . . . မင်းကသိပ်လောကြီးနေတာကိုး ဦးဘသည်မောဟိုက်သံကြီးနှင့်ပြောရင်း ခင်သက်ထား၏ပခုံးနှစ်ဖက်ကို နာနာဖက်၍ ခွန်အားရှိသမျှ ၁၀ ချက်ခန့် သွက်သွက်ကြီးဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ကုတင်ကြီးတစ်ခုလုံး သွက်သွက်ခါလျှက် ဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ်အသံများ မည်ဟီးသွားလေသည်။ ထိုအခါ ခင်သက်ထားသည်တချီပြီးသွားသဖြင့် ဦးဘ၏ကျောပြင်ကြီးကို ပွတ်တိုက်ကုတ်ချစ်နေ၏။ ပေါင်နှစ်လုံးကလည်း ကားလိုက်စုလိုက်နှင့် အကြောအချဉ်စုရုံးတက်နေသည်။ ဦးဘကားမပြီးသေးပေ။ ဟောဟဲ ဟောဟဲ နှင့်မောနေ၏။ ဗိုက်ပေါ်တွင်မလှုပ်ရှားဘဲငြိမ်သက်နေရာ ခင်သက်ထားသည်တချီပြီးသွားသဖြင့် တဏှာစိတ်လျော့နည်းကာ လေးရမှန်းသတိထားမိလာတော့၏။ ‘‘ မပြီးသေးဘူးလားဘဘကြီးရယ် ဘဘကြီးကိုယ်ကလေးလိုက်တာ ’’။
မပြီးသေးဘူးထားရဲ့ ၊ ပုံစံတမျိုးပြောင်းလိုးပါရစေ ဦးဘသည် ထား၏ရင်ဘတ်ပေါ် မှထလိုက်၏။ ပြီးလျှင် ထား၏တကိုယ်လုံးကို ကုတင်ပေါ် တွင်ကန့်လန့်၊ ဖင်နှစ်လုံးကို ကုတင်အစွန်းတွင်တင်ထားလျက်၊ အောက်မှခေါင်းအုံးခုလိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်နှစ်ချောင်းနောက်သို့ပစ်ခါ နံရံကိုတွန်းထားစေလျက် ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင်ဝင်ရပ်၍ တချောင်းကိုပခုံးပေါ် သို့ထမ်းတင်လိုက်သည်။ ဤတွင် ခင်သက်ထား၏ဆောက်ပတ်အုံလေးတစ်ခုလုံးမှာ နောက်သို့ အစွမ်းကုန်ပြူးထွက်နေရာ တောင်မတ်နေသောသူ၏လီးကြီးကို တေ့ပြီးသွင်းလိုက်သဖြင့် ‘‘ ဖွပ် ’’ ဆို အဆုံးဝင်သွားလေတော့သည်။ ခင်သက်ထားလည်း အထက်သို့ကော့ကော့တက်သွားပြီးလျှင် မော့၍ဦးဘအားကြည့်ကာ ‘‘ အခုမှ အဆုံးဝင်တယ်ဘဘကြီးရဲ့။
စိတ်ကြိုက်ဆောင့်စမ်းပါ၊ ထားတောင့်ခံထားမယ် ဟု ရယ်သွေးသွမ်း၍ပြောလိုက်သည်။ ပြီးတော့လည်း၊ ယောက်ျားများဟာ ဘယ်လောက်ပဲအသက်ကြီးကြီး ဒီနေရာမျိုးမှာ တကယ်ကြိုးစားပါလားဟု မှတ်ချက်ချမိပြန်သည်။ ‘‘ စိတ်ကြိုက်ဆောင့်စမ်းပါ၊ ထားတောင့်ခံထားမယ် ’’ ဦးဘမှာ ညှောင့်အားဆောင့်အားကောင်းသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်၍ မို့မောက်ကြီးထွားသောနို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို နာနာနယ်လျက် အချက်လေးဆယ်ခန့်မနှေးမမြန် တအားဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ . . . ‘‘ ဖွတ် . . ဖတ်ဖတ် . . စွပ်စွပ် . . ပြွတ် . . ပြွတ် . . ဖွပ် ’’ ဟူသော ဆောက်ခေါင်းထဲလီးဝင်သံထွက်သံများ တခန်းလုံးဆူညံသွားပြီးလျှင် နှစ်ဦးသားဆုံ၍ အဆုံးစွန်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိသွားကြလေသည်။ ‘‘ ကောင်းရဲ့လား ထား ’’ ‘‘ ကောင်းပါတယ် ဘဘကြီးရယ်၊ ဘဘကြီးရောကောင်းရဲ့လား ’’။
ကောင်းတာတော့မပြောနဲ့ဟေ့၊ အိမ်ကဟာမကြီးကိုမေ့သွားတာပဲ ဦးဘသည် တစ်မိနစ်ခန့်မှိန်းပြီးလျှင် ခင်သက်ထားဆောက်ဖုတ်ထဲမှ သူ၏လီးကြီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ‘‘ ဖွပ် .. ဗြွတ် ’’ ဟူသောအသံနှင့်အတူ အပြင်ဘက်သို့ တန်းလန်းကြီးထွက်လာလေတော့သည်။ ခင်သက်ထားကလည်းလူးလဲထ၍ အဝတ်အစားများဝတ်လိုက်လေသည်။ ‘‘ ကဲ တူမလေး၊ နောက်တပတ် ဥပုပ်နေ့ ဒီအချိန်ကျရင် ဆက်ဆက်လာခဲ့ဦးနော် ’’ ‘‘ ဟုတ်ကဲ့ဘဘကြီး ’’ ဦးဘသည်လီးတန်းလန်းနှင့် သူ၏ဘီရိုထဲမှ ငွေအထပ်လိုက်ဆွဲထုတ်ခါ ခင်သက်ထားအားကတိအတိုင်းပေးလိုက်သည်။ ခင်သက်ထားမှာအပြုံးပန်းပွင့်လျက် ဦးဘအပေါ် အားကိုး၍လင်လုပ်ချင်စိတ်များ တမဟုတ်ချင်းပေါ် လာလေသည်။ ‘‘ ထား ဘဘကြီးကို တကယ်အားကိုးရမှာလား . . ဟင် ’’။
ထားကငွေစက္ကူများကိုယူ၍ သူ၏လက်ပွေ့အိတ်ထဲသို့ထည့်ရင်း အပြုံးလေးနှင့်မေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဦးဘ၏ခါးကိုသိုင်းဖက်ရင်း ရင်ချင်းအပ်ထားလေသည်။ ‘‘ ဟဲ . . ဟဲ . . တကယ်မဟုတ်ဘူး အခါတရာ ( တယ် ) ပါတယ် တူမလေးရဲ့ ၊ မင်းကသာ ဘဘကြီးကို မလှည့်စားပါနဲ့ ’’ ‘‘ အို . . ဘဘကြီးရယ်၊ ထားအနေနဲ့ လှည့်စားစရာမလိုပါဘူး။ ဘဘကြီးတို့လို ယောက်ျားတွေကမှလှည့်စားမှာပါ။ အခုလဲ ဘဘကြီးမယားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီမဟုတ်လား။ ထားအနေနဲ့ ဘဘကြီးကိုဘဲလင်သားအသိအမှတ်ပြုချင်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဘဘကြီး ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါ့မလား ’’ ‘‘ အကောင်အထည်ဖော်စရာမလိုပါဘူး ထားရယ်။ ဒီလိုပဲနေသွားကြတာပေါ့။ ဘဘကြီးမင်းတို့သားအမိအတွက် လိုသလောက်စရိတ်ထောက်မှာပေါ့ ’’။
ခင်သက်ထား၏ချစ်စဖွယ်မျက်နှာကလေးမှာ ငြှိုးကျသွားသည်။ ‘‘ ဒါဖြင့် . . ဘဘကြီးက ထားကို အပျော်သဘောမျိုးပေါ့လေ ’’ ‘‘ ဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ လူကြီးဆိုတာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက်ခာ ကိုယ်ပြန်ငဲ့ရသေးတယ် ’’ ‘‘ ထားနားလည်ပါပြီ။ ဘဘကြီးတို့လို လူကြီးလူကောင်း ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် စက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေးတွေဟာ ကိုယ့်လက်အောက်ကအလုပ်သမားမိန်းကလေးတွေကို ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး အပျော်ခြေတော်တင်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ထားသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘဝအခြေအနေကမလှတော့ သိရက်နဲ့ဇွတ်မှိတ်ရတာပဲ ’’ ခင်သက်ထား၏အသံမှာ တုန်ရီလျက် မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှ မျက်ရည်များရစ်ဝဲလာ၏။ ‘‘ ဘဘကြီးမငြင်းလိုဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘဘကြီးကသူများနှင့်တူတာမဟုတ်ဘူးကွ။ မင်းကိုမယားငယ်အဖြစ်နဲ့ယူထားရင် ပေါ် သွားတဲ့တနေ့မှာ မင်းလဲဒုက်ခရောက်မယ် ဘဘကြီးလဲအရှက်ကွဲမယ်။
ဒါကြောင့် ဘဘကြီးတောင်းပန်တာပါ။ နောင်အခြေအနေပေးလာရင်လည်း ဖြစ်သလိုစခန်းသွားကြသေးတာပေါ့ ’’ တကယ်တော့လည်း ထားတို့လို အားကိုးရာမဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် ယောက်ျားတကာတို့၏ လှည့်စားခြင်းကိုခံရမည်သာဖြစ်သည်။ ‘‘ ရှိပါစေတော့ ဘဘကြီးရယ်၊ ထားရဲ့ကုသိုလ်ကံကဆိုးပါတယ်၊ ကိုင်း ထားပြန်မယ်၊ ဘဘကြီးချိန်းတဲ့နေ့ကို ထားလာခဲ့ပါ့မယ် ’’ ထားသည် ငိုသံပါလေးနှင့် ပြောဆိုပြီးနောက် ဦးဘ၏အခန်းထဲမှ ချာခနဲလှည့်ထွက်သွားလေသည်။ ဤအချိန်မှစ၍ ထား၏ဘဝမှာ ကြေးတန်းစားမိန်းမပေါ့ဘဝသို့ ကူးပြောင်းမှန်းမသိ ကူးပြောင်းသွားလေပြီ။ အပြင်ဘက် ဘိနပ်ချွတ်သို့ရောက်သောအခါ ထားသည်မျက်လုံးပြူးသွားရှာ၏။ အကြောင်းမူကား သူမချွတ်ခဲ့သော ဒေါက်မြင့်သားရေဘိနပ်မှာ မတွေ့ရတော့ပေ။
အနီးအပါးတွင်မည်သူမျှလည်းမတွေ့ရ။ လူရိပ်လူခြေလည်းမမြင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး တိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်ချက်သားကောင်းနေသည်ကို ထူးဆန်းစွာတွေ့ရလေသည်။ သို့သော် အချိန်မရှိတော့သဖြင့် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးတောမနေတော့ပဲ ခွေးချီသွား၍သာ မိမိဘိနပ်မတွေ့ရတာဖြစ်မည်ဟု တထစ်ချယုံကြည်လျက် လှေခါးမှပြေးဆင်းသွားလေသည်။ အိမ်ရောက်သောအခါ မိခင်ကြီးအား ရရှိလာသည့်ငွေကြေးနှင့် ဆရာဝန်ခေါ် ၍ ကုသသဖြင့် သက်သာသွား၏။ ဆရာဝန်ပြန်သွားပြီး များမကြာမီအတွင်း ခင်သက်ထားမမျှော်လင့်တော့သော ချစ်သူဇော်လွင် ပေါက်လာသည်။ ခင်သက်ထားမှာဝမ်းသာလွန်း၍ ရုတ်တရက်အံအားသင့်သွားသည်။ ပြီးတော့လည်း မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှ မျက်ရည်ဥများဝဲလာသေးသည်။
ဟင် .. မောင် . . ထားကိုမမုန်းသေးဘူးနော် ခင်သက်ထားဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ဇော်လွင်အားပြေးဖက်လိုက်၏။ ဇော်လွင်ကလည်း အလိုက်သင့်ပြေးဖက်၍ ‘‘ မမုန်းသေးပါဘူးထားရယ်၊ ထားဟာ သစ္စာရှိမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း မောင်အခုမှသိရလို့ တောင်းပန်ဘို့တမင်လာခဲ့တာပါ ’’ ဟု အပြုံးနှင့် လေချိုအေးအဖြေပေးလိုက်သည်။ ထား၏ချစ်စရာမျက်နှာလေးမှာ လမင်းကြီးပမာ ဝင်းလက်သွားရှာသည်။ ‘‘ ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရယ်၊ လာအခန်းထဲသွားရအောင်။ မောင့်ကိုလေ ထားမျိုသိပ်ထားသမျှခံစားချက်တွေဖွင့်ပြောချင်လွန်းလို့ ’’ ထား၏မိခင်ကြီးမှာ ဆရာဝန်၏ဆေးတန်ခိုးကြောင့် အိပ်ပျော်နေလေသည်။ ထိုအချိန်ဝယ် ခင်သက်ထားနှင့်ဇော်လွင်လည်း အခန်းထဲသို့ တပြုံးပြုံးရောက်ရှိလာကြသည်။
အခန်းတခုလုံးကား မိန်းကလေးတဦးတယောက်၏ အသုံးအဆောင်များပြည့်နှက်နေရုံမျှမက ခြေရင်းပိုင်း၌ ကိုယ်အလှပြုပြင်သောအားကစားပစ္စည်းများကိုပါ တွေ့မြင်ရပေသည်။ ‘‘ ထားကအားကစားလဲဝါသနာပါတယ်နော်၊ မောင်ဖြင့်သိတောင်မသိဘူးကွယ်၊ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကာယဟာသဘာဝထက်ပိုပြီးလှနေတာကိုး ’’ ဇော်လွင်သည် ခင်သက်ထား၏အလှကိုချီးကျူးပြီးနောက် ပခုံးမှလွယ်အိတ်ကိုနံရံမှ ချိတ်တခုတွင်ချိတ်ထားလိုက်၏။ ခင်သက်ထားမှာဇော်လွင်၏အိတ်ကိုတချက်မျှလှမ်းကြည့်လျက် ‘‘ ဘာတွေများဝယ်လာတာလဲမောင်ရယ် ဒုက်ခရှာလိုက်တာ၊ ထားကလက်ဆောင်ပေးမှချစ်မယ့်ကြိုက်မယ့်မိန်းမစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မောင့်အပေါ် မှာတကယ့်မေတ္တာစစ်နဲ့ချစ်နေတာပါ၊ မှန်း . . ဘာတွေလဲ ထားမကြည့်ရဘူးလား ’’ ဟုပြောပြောဆိုဆိုလွယ်အိတ်ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်စဉ်။
ဇော်လွင်က ခင်သက်ထား၏လက်ကိုဆွဲကိုင်ထားလျက် ‘‘ မကြည့်ပါနဲ့ထားရယ်၊ မောင်ပြန်ခါနီးကျပြလဲပြမယ် ပေးလဲပေးမယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူတယောက်အနေနဲ့အမြတ်တနိုးပေးတဲ့လက်ေ ဆာင်ပစ္စည်းကိုတော့ လက်ခံစေချင်တယ် ’’ ဟုအပြုံးနှင့်ပြောရင်း တယောက်အိတ်ကုတင်လေးပေါ် သို့တွဲခေါ် သွား၏။ ‘‘ ထားမေမေနေကောင်းသွားပြီမဟုတ်လားဟင် ’’ ဇော်လွင်ကစကားလွှဲ၍မေးလိုက်သည်။ ‘‘ နေကောင်းသွားပါပြီမောင်ရယ်၊ ဒီအပတ်တော့ရောဂါလုံးလုံးပျောက်ကင်းရဲ့လို့မျှော်လင့်ရတာပဲ ’’ ‘‘ ဝမ်းသာပါတယ်ကွယ် ’’ ခပ်ပြုံးပြုံးပြောလျက် ဇော်လွင်ကခင်သက်ထားအားရင်ခွင်ထဲဆွဲပြီးတချက်မျှ နမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ ခင်သက်ထားကနားလည်လိုက်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့်အခန်းတံခါးကိုကပြာကသီထပိတ်၍ ကုတင်ပေါ် ၌ပြန်ထိုင်သည်။
ထိုအခါဇော်လွင်က ရင်ချင်းအပ်တအားဖက်၍ အလိုက်သင့်လှဲချလိုက်သည်။ ‘‘ မောင့်အလိုကျထားမငြင်းရက်ပါဘူးမောင်ရယ်၊ ဒါပေမယ့် မေမေနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် မသင့်တော်ဘူးလို့အောက်မေ့တာပဲ ’’ ‘‘ ဘာဆိုင်လို့လဲထားရယ်၊ ဒါတွေအယူမရှိပါနဲ့ ’’ ပြောရင်းဆိုရင်း ခင်သက်ထား၏ အပေါ် ကြယ်သီးများကိုတလုံးချင်းဖြုတ်နေသည်။ ထို့အတူ ထမီကိုခြေထောက်နှင့်ကန်၍ ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘော်လီအင်္ကျီကို နို့ကြီးနှစ်လုံးအပေါ် မှဆွဲချွတ်၍ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ပေးကာ အဆိုပါကြီးထွားဝင်းဝါနေသောနို့ကြီးနှစ်လုံးကို အသာအယာပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ ထို့နောက် လူချင်းခွာလျက် ဇော်လွင်သည် သူ့ကိုယ်မှအဝတ်အစားများကို တခဏချင်းချွတ်ချလိုက်သည်။ ခင်သက်ထားမှာ သဘာဝကိုယ်လုံးနှင့် ပကတိဖြူဝင်းနေသည်။
ချစ်သူတယောက်မို့ ရှက်သွေးလေးများဖြန်းကာ ပေါင်နှစ်လုံးကိုရှက်လိမ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဇော်လွင်မှာ ဆောက်ပတ်ကိုမတွေ့ရပဲ မို့မောက်ချွန်ကားသောနို့ကြီးနှစ်လုံးနှင့် ပြေပြစ်ဖြောင့်စင်းသည့် ပေါင်တံနှစ်ချောင်းကိုသာ မက်မောစဖွယ်မြင်တွေ့နေရလေသည်။ ခင်သက်ထား၏သဘာဝအလှကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ဇော်လွင်၏ကြီးထွားရှည်လျားလှသော လီးတံကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းထောင်မတ်လာလေသည်။ လူချင်းခွဲနေသဖြင့် တယောက်၏သဘာဝကိုတယောက်ကတွေ့မြင်နေရရာ ထားကရှက်ဟန်ဖြင့် ‘‘ အို မောင်ကလဲ ရှက်စရာကြီး ’’ ဟုဆို၍ ပက်လက်အိပ်နေရာမှ တဘက်သို့ကြောခိုင်းကာစောင်းအိပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ကြီးထွားဖွံကားသောဖင်သားကြီးနှစ်လုံးနှင့်အတူ ညက်ညောသောကျောပြင်လေးတလျောက်ကိုမက်မောဖွယ်တွေ့မြင်ရပြန်လေသည်။
ဇော်လွင်မှာ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပေ။ ခင်သက်ထား၏နောက်တွင်အတူလှဲအိပ်၍ တောင်မတ်နေသောသူ၏လီးကြီးကို ဖင်နှစ်လုံးကြားသို့အသာတေ့သွင်းကာ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကိုအသာအုပ်ကိုင်လိုက်ရာ ခင်သက်ထား၏တကိုယ်လုံးမှာ ကြက်သီးများဖြန်းပြီးတုန်လှုပ်သွားရလေသည်။ ‘‘ မောင်ကလဲကွယ် . . ’’ ခင်သက်ထားသည်ချွဲတဲတဲအသံနှင့်ညုကာ ပက်လက်လှန်မပေးဘဲ နို့နှစ်လုံးကိုလက်ဝါးနှင့်ဖုံး၍ စောင်းမြဲစောင်းထား၏။ ဖင်ကြားထဲတွင်လီးကြီးထိုးသွင်းထားသဖြင့် ယားသလိုလို ခံချင်သလိုလိုနှင့် တမျိုးအရသာထူးနေသည်။ အမှန်မှာတော့ မိမိတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သောချစ်သူတယောက်နှင့် လွတ်လပ်စွာထင်သလိုနေရသည်မှာ ကြည်နူးပျော်ရွင်ှစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါ၏။ ဇော်လွင်သည်နောက်မှနေ၍ ဖင်ကြားထဲမှလီးကိုသွင်းချီထုတ်ချီအသာဆက်ညှောင့်နေသော်လည်း။
ဆောက်ခေါင်းအတွင်းသို့မဝင်ပေ။ ဆောက်စေ့နှင့် ဆောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလောက်သာ ဒစ်နှင့်ပွတ်တိုက်မိသည့်အတွက် နှစ်ဦးစလုံးမရိုးမရွနှင့် ဆိုးတိုးဆတ်တတ်ဖြစ်လာကြ၏။ အထူးသဖြင့် ခင်သက်ထားမှာခံချင်စိတ်ပြင်းထန်လာသည့်အလျောက် သူ၏ဖွံထွားလှသော ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးကိုနောက်သို့ ကော့၍ကော့၍ပေးနေသဖြင့် ဇော်လွင်ကနို့နှစ်လုံးကိုတအားဆုပ်နယ်လျက် လီးကိုပြန်ဆွဲနှုတ်ပြီးလျှင် ပက်လက်ဆွဲလှန်လိုက်လေသည်။ ပြီးမှ အပေါ် သို့လှိမ့်တက်ကာ ပါးလွှာသောနှုတ်ခမ်းအစုံကို တအားကုန်တေ့စုပ်လိုက်ပြန်ရာ ခင်သက်ထားသည်ငါးဖယ်ပျံကော့တက်လာလျှက် ကျောပြင်ကြီးကိုအောက်မှပင့်သိုင်းဖက်ထားလေတော့သည်။ ဆောက်ခေါင်းအတွင်းမှလဲဆောက်ရည်ကြည်များစိမ့်ဆင်းလာလျက် ပေါင်နှစ်လုံးကို စိလိုက်ဟလိုက်နှင့် ခါးကလေးကော့၍ကော့၍ထိုးနေလေသည်။
မောင် . . မောင် . . ဟင့် . . ဟင်း . . ဟင်း သဲ့သဲ့မျှထွက်ပေါ် လာသော ( ခေါ် သံ ) ညည်းညူသံများမှာ တဏှာရာဂ၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆွလာသော ညုသံများသာဖြစ်ပါ၏။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မို့ ( တက်လိုးပါတော့ မောင်ရယ် ) ဟုဖွင့်မပြောသော်လည်း ဤသို့ ကိုယ်အမူအယာ နှုတ်အမူအယာပြခြင်းအားဖြင့် တက်လိုးခိုင်းသည်နှင့်ဘာမျှမခြားတော့ပေ။ ထို့ကြောင့်ဇော်လွင်သည် နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကိုအသာအယာပွတ်ချေရင်း တောင်မတ်နေသောသူ၏လီးတန်ဒစ်ကြီးကို ပွင့်အာ၍အရည်ရွမှ်းနေသော ဆောက်ခေါင်းအတွင်းသို့အသာတေ့သွင်းလိုက်ရာ ‘‘ ပြွတ် ’’ ဆိုတဝက်နီးပါးမျှဝင်သွားသည်။ ဤတွင် ခင်သက်ထားသည်အစွမ်းကုန်ထရွနေသဖြင့် ဇိမ်တမျိုးတွေ့လျက်အယားပြေသလိုလိုဖြစ်သွားပြီးလျှင် တချက်မျှတအားကုန်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ဇော်လွင်ကထိုးမသွင်းပဲ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ဝင်သွားလေသည်။
ထား မောင်နဲ့အခုလိုနေရတာ သိပ်ကောင်း၊ သိပ်ပျော်တယ် မောင်ရယ်။ မောင့်စိတ်တိုင်းကျထင်သလိုသာလိုးပါတော့၊ ချစ်တဲ့သူနှင့်အတူတူနေရာတာဟာ လောကနိဗ္ဗာန်ပါဘဲ ’’ ‘‘ မောင်လဲဒီလိုပါပဲ ထားရယ် ’’ ဇော်လွင်သည်ပြောပြောဆိုဆို အဆုံးအထိတအားဆောင့်လိုးထည့်လိုက်၏။ ခင်သက်ထားမှာ ရုတ်တရက်ကုန်းတက်သွားကာမျက်လုံးအစုံပြူးသွားရှာသည်။ ထို့နောက် ဇော်လွင်မှာသုံးလေးချက်မျှဆောင့်၍ နှုတ်ခမ်းကိုလျှာနှင့်ကလိပေးလိုက်၊ နို့နှစ်လုံးကိုကုန်းစို့ပေးလိုက်၊ အဆုံးသွင်းပြီးပွတ်လိုက်ထိုးလိုက်ဖြင့်အရသာမတွေ့တွေ့အောင် ဇိမ်ခံညှောင့်နေသဖြင့် ခင်သက်ထားမှာမျက်လုံးအစုံမှေးလျှက်ထွန့်ထွန့်လူးနေလေသ ည်။ ယင်းသို့လိုးနေရာမှတဖန် ဇော်လွင်က ဗိုက်ပေါ် မှကုန်းထ၍ ခင်သက်ထား၏ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးကိုထောင်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြဲလိုက်သည်။
ပြီးလျှင် တလုံးကိုဘေးသို့ကားနိုင်သမျှ ကားအောင်ဖြဲထားစေလျှက် ကျန်ပေါင်တလုံးကိုဒူးကွေးထောင်ကာ ပုခုံးတဖက်ကို ဒေါင့်တန်းဆွဲပြီးလျှင် သုံးလေးချက်ခန့်အားရှိပါးရှိ ဆောင့်လိုးထည့်ပေးလိုက်၏။ ‘‘ ဘွတ် . . ဘွတ် . . စွိ . . စွိ . . ’’ ‘‘ အား . . ’’ ‘‘ ကောင်းရဲ့လား . . ထား ’’ ‘‘ အဆုံးဝင်တော့ ကောင်းလဲကောင်း အောင့်လဲအောင့်တယ်မောင်ရယ်၊ ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တတ်ရင်မခေတော့ဘူး။ ဟင်း . . မောင်တော့ ဖာမတွေကိုလိုးဘူးပြီထင်တယ် ဒီနည်းကိုဖာသည်မတွေသင်ပေးမှာဘဲ ’’ ‘‘ ထားကလဲကွာ သဘာဝပဲ ဘယ်သူသင်ပေးရမှာလဲ ’’ ‘‘ တော်စမ်းပါမောင်ရယ်၊ မောင်တို့ယောက်ျားတွေလားနေမှာ ’’ ခင်သက်ထားကချစ်မျက်စောင်းလေးဝေ့ကာ ခနဲ့လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပုလဲသွယ်သွားလေးပေါ် လွင်လာအောင်ပြုံးနေ၏။
ဇော်လွင်ကမူ မည်သို့မျှပြန်မပြောတော့ဘဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လိုးနေရာဆောက်ပတ်မှာ အစွမ်းကုန်ပြူးအာပြဲထွက်နေသဖြင့် လီးကြီးဝင်သွားတိုင်း ‘‘ ဖွပ် . . စွပ် . . ဖွပ် . . စွပ် ’’ ဟူသောအသံများနှင့်အတူအရသာရှိရှိစီးစီးပိုင်ပိုင်ဝင်ထွက်နေ၏။ ခင်သက်ထားသည်အထူးအရသာတွေ့ကာ မျက်လုံးစင်းနေ၏။ ထိုအတွင်းဇော်လွင်က တအားဆောင့်၍ အချက်သုံးဆယ်ခန့်အဆက်မပြတ်လိုးပေးလိုက်သည့်အတွက် ခင်သက်ထားမှာကောင်းလွန်းသဖြင့် သူ၏ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ကော့ပေးလို က်ပြန်သည်။ ‘‘ အောင်မယ်လေး . . ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် . . ဆောင့်ပါဆောင့်ပါ . . နာနာကြီးဆောင့်လိုးလိုက်စမ်းပါ . . ဟင်း . . ဟင်း ’’ ဇော်လွင်သည် စာကလေး၏စံချိန်ကိုချိုးကာ မနားတမ်းသွက်သွက်ကြီးဆောင့်နေ၏။
ကုတင်တခုလုံးမှာ သိမ့်သိမ့်တုန်လျှက် ဆောက်ခေါင်းထဲလီးဝင်သံထွက်သံများမှာ တခန်းလုံးဆူညံနေလေတော့၏။ ခင်သက်ထားသည်လီးမျိုးစုံသလောက်ခံဘူးသူတဦးဖြစ်သော်လည်း ဇော်လွင်၏လီးမှာမကြီးလွန်းမသေးလွန်း ပေမှီလူတန်းစေ့လီးဖြစ်သဖြင့် အတိုင်းထက်အလွန်ခံ၍ကောင်းနေလေသည်။ ထို့အပြင် ရိုးရိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဆောက်ပတ်တခုလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြဲထားကာ အပေါ် မှဖိလိုးနေသောပုံစံမျိုးမို့ဇိမ်တွေ့လှပေသည်။ အထူးသဖြင့်ပေါင်တချောင်းကို ဘေးသို့အစွမ်းကုန်ကားထားပြီးလျှင် တချောင်းကိုထောင်၍ ဒူးကွေးစေလျှက် ဒူး၏ထိပ်ဖျားပေါ် မှ လက်တဖက်နှင့်ဖိချပြီးလိုးလိုက်သောကြောင့် ပုံဆန်းသလောက်အဆုံးဝင်ပြီး ခံ၍ကောင်း၍ကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဇော်လွင်သည် အချက်နှစ်ဆယ်ခန့်ဆောင့်ပေးလိုက်သောအခါ နှစ်ဦးစလုံးရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်သုတ်ရည်များပန်းထွက်သွားကြလေသည်။ ဤတင်္ဒဂဝယ် နှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှုများမြန်လျက် တဖြည်းဖြည်းပြင်းထန်လာကြ၏။ ထို့နောက် ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးများ ကိုယ်စီအသီးသီးကုတ်ကွေးတက်သွားကြကာ နောက်ဆုံးဇော်လွင်က ခင်သက်ထား၏ဗိုက်ပေါ် သို့မှောက်ချလိုက်လေတော့သည် ….. ပြီးပါပြီ။
မှောင်မိုက်နေသောကောင်းကင်ပြင်ထက်မှာ ကြယ်ရောင်တချို့က စိန်ပွင့်လေးများကြဲပက်ထားသကဲ့သို့ တလက်လက်ဖြင့် လင်းတခါမှိန်တလှဲ့ ဖြင့် သူတို့တတ်နိုင်သော အလင်းကလေးဖြင့် ကမ္ဘာမြေထက်သို့ လင်းချပေးနေသည်။ ပူလောင်ပြင်းပြသော နွေလယ်ညရဲ့ မှောင်မိုက်မှု့အောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး တိတ်ဆိတ်လို့နေသည်။ သုတ်ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်သော လေပြည်ညင်းတစ်ချက်ကြောင့် အမှောင်အောက်မှာအိပ်ငိုက်နေသော သစ်ပင်တို့လူးလွန့်လှုပ်ရှားသွားကြသည်။ “ရှဲ….” ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်သော လေပြည်ညင်းရဲ့တိုးဝှေ့ကျီစယ်မှု့ကြောင့်လားမသိပေမဲ့တစ်ခုသော တစ်ထပ်တိုက်ကလေးရဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးတဦး အိပ်ယာထက်မှ ဖျပ်ကနဲ လန့်နိုးလာသည်။ သူမနာမည်က ခင်မဟုခေါ်သည်။တင်းတင်းပြည့်ပြည့်ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားခန္ဓာကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးခေတ်စကားဖြင့်ပြောရလျင် တော်တော်လေး ကိတ်သည်ဟုပြောရမည်။ ခင်မအိပ်ယာခေါင်းရင်းရှိမီးခလုတ်ကို နှိပ်ဖွင့်လိုက်ကာ ကပိုကရိုဖြစ်နေသောဆံပင်တို့ကို သားရေကွင်းဖြင့်စည်းနှောင်လိုက်သည်။ အခန်းမီးမဖွင့်တော့ပဲကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာအိမ်သာသွားရန်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ တိတ်ဆိတ်နေသော ညလယ်မှာ သေးပေါက်ရန်အတွက်ထွက်လာသောခင်မ အခန်းတံခါးကို အသံမထွက်စေရန် ဖြည်းညင်းစွာ ပိတ်လိုက်သည်။ ခင်မတို့အိမ်မှရေလောင်းအိမ်သာကတိုက်နှင့်တဆက်တည်းမဟုတ်ပဲတိုက်နောက်ဘက်ပေနှစ်ဆယ်လောက်အကွာမှာ ဆောက်ထားသည်။ ဧည့်ခန်းကို ဖြတ်ကာ အနောက်ဘက်သို့ ခြေလှမ်းခပ်သုတ်သုတ်လှမ်းဖို့ပြင်လိုက်သည့်ခင်မမျက်ဝန်းတွေကအိမ်၏နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်သော တူတော်မောင် စိုးနိုင်ထွန်းအခန်းတံခါးရှေ့မှအဖြတ်တွင် မပွင့်တပွင့်ဖွင့်ထားသောတံခါးကြားမှအလင်းရောင်တချို့ […]